CNF/A Nih Ralhrang An Phomh Taktak Ve Cang Hna Lai – Buanchukcho
May 17, 2021 admin THAWNGPANG 0
CNF/A nih ralhrang kawlralkap an thuat ve cang hna lai. Faktuk in tukdoh kahnakatongmi Mindat mipi he dirtti in Ralhrang kawlralkap hna cu doh, lehrulhnak tuah dingin Nizan ah CNF/A nih thanhnak an tuah. Hi konghe pehtlaiin CNF/A in chimnak nawlngeitu Salai Htet Ni Myanmar Now thawngzamhnak ahachim mi cuatanglei bantuk inasi.
Myanmar Now thawngzamhnak ah Salai Htet Ni nihachimmi cu kan i runvennak or humhimnak dingah ralhrang kawlralkap hna cu tukdoh kahnak lei in lehrulhnak kan tuah hna lai tiahachim. Mipi cungah ralhrang kawlralkap hna nih faktuk in thil an tuah. Curuang ahcun mipi hna an himnak ding le an inn le loahimnak ding caah CNF/A lei in kan dirttia lai tiahachim. Atangah mindat konghe pehtlaiin Mindat uktu chimmi le Pu Htet Ni chimmi kawlca in relchih khawh asi.
မင်းတပ်ပြည်သူများနှင့် ရပ်တည်ကာ စစ်ကောင်စီကို စစ်ရေးအရတုံ့ပြန်မည်ဟု CNF ထုတ်ပြန်. အပြင်းအထန်ဖိနှိပ်ခံမှုခံနေရသည့် မင်းတပ်ပြည်သူများနှင့် ရပ်တည်ကာ စစ်ကောင်စီကို စစ်ရေးအရ တုံ့ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး(CNF) က ယမန်နေ့ (မေ ၁၅) တွင် သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခွင့်အတွက် စစ်ကောင်စီကို စစ်ရေးအရဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးအရဖြစ်ဖြစ် တုံ့ပြန်သွားမည်ဟု CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆလိုင်းထက်နီက Myanmar Now ကို ပြောသည်။ “စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရပ်က ပြည်သူအပေါ် အကြမ်းဖက်ရက်စက်တာပဲ။
ဒီတော့ CNF အနေနဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူရဲ့ အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက် ကာကွယ်ရပ်တည်ပေးရမှာပဲ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မင်းတပ်မြို့တွင် စစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ ၇၂ နာရီကြာ အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက် စစ်ကောင်စီက ယမန်နေ့တွင် မြို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ စစ်ကောင်စီတပ်များသည် စက်သေနတ်များ၊ စိန်ပြောင်းများ၊ ပခုံးထမ်းလောင်ချာများသာမက အဝေးပစ်အမြောက်လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပါ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမူ ရိုးရာလက်လုပ်တူမီးသေနတ်များ၊ နှစ်လုံးပြူးများ၊ လက်လုပ်မိုင်းများဖြင့်သာ ခုခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်ကောင်စီက လူသူလက်နက်အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အတွက် နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရကြောင်း ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ယမန်နေ့ညနေပိုင်းတွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည် မင်းတပ်မြို့မှ ယာယီဆုတ်ခွာပေးထားရပြီး မင်းတပ်မြို့ကို စစ်ကောင်စီတပ်များက စီးနင်းထားသည်။ ဒီနေ့မနက် မြို့ထဲမှာ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်တာတချို့ ရှိသေးတယ်။ ပြီးတော့ စနိုက်ပါ (လက်ဖြောင့်သေနတ်သမား) နဲ့ မဲမဲမြင်ရာ လှမ်းပစ်နေတယ်” ဟု မင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက Myanmar Now ကို ယနေ့ (မေ ၁၆) မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြောသည်။
မင်းတပ်မြို့ပေါ်မှ ထောင်နှင့်ချီသော ဒေသခံများ တောထဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီး မြို့တွင်း၌ အနည်းငယ်သာကျန်ရှိနေသည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။ စစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် ၇၂ နာရီကြာ တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်မှ ငါးဦးသေဆုံးပြီး ၁၀ ဦးကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲများအတွင်း စစ်ကောင်စီဘက်မှ ထိခိုက်သေဆုံးသူ ၃၀ ခန့် ရှိနိုင်သည်ဟု ဒေသခံများက ခန့်မှန်းပြောဆိုသော်လည်း Myanmar Now အနေဖြင့် သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ စစ်ကောင်စီက သတင်းထုတ်ပြန်ထားရာတွင် မော်တော်ယာဉ်ခြောက်စီး မီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးကာ တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ ကျဆုံး၊ ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။Crd: Myanmar Now
Iang Len Sung Nih Bawipa Sunparnak Caah Hlathiang A Sak Mi Tha Kho Taktak (+Video)